"Hunhu kutanga ne, Kutendeseka sehwaro, Kambani yakatendeseka uye kubatsirana purofiti" ndiyo pfungwa yedu, senzira yekuvaka nguva dzose nekutevera kugona kweZvigadzirwa,,,, Nehurefu hwakawanda, mhando yakanaka, mitengo inonzwisisika uye dhizaini dhizaini, zvigadzirwa zvedu zvinoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri aya uye mamwe maindasitiri. Kugadzira kukosha kwakawanda kwevatengi ibhizinesi redu uzivi; mutengi arikukura ndiko kushanda kwedu kudzingirira Zvigadzirwa, Kugamuchirwa kushanyira kambani yedu, fekitori uye yedu yekuratidzira uko kunoratidza zvigadzirwa zvakasiyana izvo zvinosangana nekutarisira kwako. Zvichakadaro, zviri nyore kushanyira webhusaiti yedu, uye vashandi vedu vekutengesa vanoedza nepese pavanogona kuti vakupe sevhisi yakanakisa. Ndapota taura nesu kana uchida rumwe ruzivo. Chinangwa chedu ndechekubatsira vatengi kuona zvinangwa zvavo. Tiri kuita kuyedza kukuru kuti tiwane iyi yekuhwina-kuhwina mamiriro.
Husiku Imba Kupfeka Kwemurume-HDR-M9611
Chinhu It .:Abz-Hdr-m9602
Mucheka: Island Velvet Ine Embossed
Unogona Kuva Panzvimbo Imwe Ruvara
Moq: 2000set (Kana Tine Stock, Inogona Kuva Order 200-500set)
Nguva Yekutumira: 50days
Kubhadhara: t / t, l / c At Kuona
Husiku Imba Kupfeka Kwemurume-HDR-9613-9614
Chinhu It No.:Abz-Hdr-m9613/9614
Mucheka: Island Velvet Ine Strip
Husiku Kumba Kupfeka Kwemurume
Chinhu It .:Abz-Ctm9608
Mucheka: Polyester62% Cotton35% Spandex3%, Knitting Mucheka）
Rukoko: 100% Polyester
Ruvara: Rima Bhuruu, Grey
Chinhu CHO HAPANA.:ABZ-CTM001/002
Jira: POLYESTER62% COTTON35% SPANDEX3% （KUGADZIRA Jira）
UNOGONA KUSANGANA NEMWE RUVARA
MOQ: 2000SET (KANA TAKABATIRA STOCK, INOGONA KURONGA 200-500SET)
NGUVA YOKUDZIDZA: 50DAYS
Kubhadhara: T / T, L / C PAKUONA
Inodzoserwa MAMWE PADDED VEST
Vheti iyi yakapetwa yevarume.Test iyi inodzoserwa .Iyo yakakwira kora uye dzakasiyana jira reruvara.
YeMurume Yakapetwa Vest
Vheti iyi yakapetwa yevanhurume.Collar yepamusoro uye jira rakasiyana rakasonwa nemabhegi mazhinji.
Herringbon Yakapetwa Yakazara Yekuvhura Bhachi NaHood
Iyo herringbone mvere yakarongedzwa bhachi ine hood yemurume
Iri ndiro jira remhasuru rakakoshwa rine bhudzi rine hood yemukomana.Iye 'jaketi jaya risina kujairika .Rizere rekuvhura kumberi nezip uye kumberi nhunzi.
Hafu Yakavhurika Man Autumn Jekete NeHood
Iyi hafu yakavhurika zipi bhachi. Iri jekete rekuzorora. Inodziya mhepo, inodziya, bhachi rine hood. Hodhi ine mbiri yekumisa uye yakasununguka.
Ine mahwendefa maviri epazasi ezasi ane zipi .Imberi iri muhomwe pasi pebhururuka, ndeyemafashoni uye inoita kunge diki. Dhizaini dhizaini iri kumashure kwepazasi kwemukati nechipenga chisingaonekwe chekushongedza kana kumwe kushandiswa nechero mutengi. chiuno chinodhonza.
Iyo Yakazara Yakavhurika Man Autumn Jacket Iine Hood
Iri rakazara rakavhurika zipi bhachi.Iye yekuzorora bhachi, Inodziya mhepo, inodziya, bhachi rine hood. Iyo hood ine mbiri yekumisa uye yakasununguka.
Ine mahwendefa maviri epazasi ezasi ane zipi. Iyo dhizaini dhizaini ndeyekusona chipfu nechiputi chisingaonekwe chekushongedza kana kumwe kushandiswa nechero mutengi. Chero zipi ine yekudhonza chiuno.
Aya maitiro akapusa uye akanaka. Iyi dhizaini inokodzera madzimai. Zvigadzirwa zvigadzirwa zvinogadzira yakasarudzika kuzadza (DuPont Sorona)
Kukora indekisi: Ultra-mutete, zvakajairika ukobvu
Inokodzera mwaka: Mwaka, chirimo, matsutso uye chando
jekete rakapfeka mukadzi
Iyo Dupont Yakapetwa Jacket YeVakadzi
Aya maitiro akapusa uye akanaka. Iyi dhizaini inokodzera madzimai.Product hunhu ndewe kugadzirwa kwakakosha (DuPont Sonora), Inotonhora uye yakareruka kupfuura yakajairwa yekuzadza bhachi.